Baolina kitra : Hanokatrana ny fiadiana ny amboara eran-tany anio i Rossia sy Arabie Saoudite -
AccueilVaovao SamihafaBaolina kitra : Hanokatrana ny fiadiana ny amboara eran-tany anio i Rossia sy Arabie Saoudite
Baolina kitra : Hanokatrana ny fiadiana ny amboara eran-tany anio i Rossia sy Arabie Saoudite
14/06/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hitodika any Rossia indray manomboka anio ny mason’ny mpitia baolina kitra. Hanokatra ny fiadiana ny amboara eran-tany anio ny fihaonan’i Rossia mpampiantrano sy ny ekipan’i Arabie Saoudite. Amin’ny 6 ora eto Madagasikara, izay mitovy ora amin’i Mouscou, no hanaovana izany lalao izany ao amin’ny kianjan’i Loujniki ao Mouscou. Mialoha izany anefa, atsasakadiny mialoha izany no hanatanterahana ny lanonam-panokafana toy ny mahazatra amin’ny fihaonana iraiam-pirenena toy izao. Miara-dia amin’ny lanonam-panokafana ny fampahafantarana ireo vahiny rehetra tonga any an-toerana sy ny mpanaraka ny lalao maneran-tany ireo kolontsaina rosiana amin’ny lafiny samihafa.
Handray anjara ary hitondra ny talentany amin’ny fanokafana ity fihaonana ara-panatanjahantena goavana ity ilay mpanakanto britanika Robbie williams. Hanampy azy aorian’izay, ilay mpiangaly feo klasika rosian aida Garifullina. Izy dia anisan’ireo mpanakanto manam-peo ankafizin’ny rosiana amin’izao fotoana.
Anisan’ny zava-baovao amin’ity fiadiana ny amboara eran-tany any Rossia ity ny fampiasana ny fitsarana amin’ny alalan’ny raki-tsary sy ny fahafahana manolo mpilalao faha-4, ao anatin’ny fanalavam-potoana ihany.
Mpitsara 36, mpitsa mpanampy 63 avy amin’ny firenena 43 no nantsoin’ny federasiona Iraisam-pirenen’ny baolina kitra (FIFA) hiantsoroka ny fitsarana ireo lalao 64 mandrafitra ny fiadiany ny amboara eran-tany.